Vemabhizimusi Vanozvarwa? | Martech Zone
Muvhuro, March 28, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Jack Dorsey, muvambi we Twitter, inokurukura zvemabhizimusi. Ndakafarira mhinduro dzake dzakananga - anofarira zvechokwadi kuwana nekugadzirisa matambudziko, asi akadzidza humwe hunhu hunodiwa hwamuzvinabhizimusi kuburikidza nekukura kwemabhizinesi ake.
Ndine zvishoma zvekutora zvakasiyana pamabhizimusi. Ini zvechokwadi ndinofunga kuti munhu wese anozvarwa aine tarenda rezvemabhizimusi, asi vazhinji vevabereki vedu, vadzidzisi, vakuru, shamwari uye kunyangwe hurumende yedu vanowanzo pwanya bhizinesi. Kutya muvengi chete kumabhizimusi… uye kutya chinhu chatakadzidziswa uye takatarisana nacho muhupenyu hwedu hwese.
Kutya ndosaka vaparidzi vakaburitsa mafomura mabhuku (uye vanhu vakaita sa Seth Godin vari kupandukira). Kutya ndosaka mamwe mafirimu aburitswa ari remake yeiyo yekutanga firimu yakaita zvakanaka. Kutya ndosaka kwakachipa-kudhura, kunotyisa chokwadi zviratidziro zvakazadza terevhizheni nendege. Kutya ndosaka vanhu vazhinji vachishanda mumabasa asinganakidze avasina kufara nawo… vanotenda kuti budiriro ndiyo zvisinei uye kukundikana ndizvo zvakajairika. Hazvisi. Bvunza vanhu vane ravo bhizinesi uye uchawana vazhinji vacho vachishuvira dai vakariita nekukasira uye vazhinji vacho havazombodzoka kumashure.
Kutya kunopera simba - kunyangwe kune vezvemabhizimusi. Ndinoziva shamwari dzinoverengeka dzine fungidziro dzinoshamisa, asi kutya kunodzivatadzisa kuona kwavo kubudirira. Chii chiri kukumisa?